DVR waa video ku duuban digital oo laga yaabo inuu ka qalab macaamiisha qalabka korontada ama software codsiga. Haddii aad u isticmaashay sida video ku duuban digital si ay u qoraan videos, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad ka ciyaaro, kuwaas oo files duubo DVR meel kasta. Diinta DVR in MP4 waa fikrad wanaagsan, waayo, MP4 waxaa si balaadhan looga isticmaalaa on qalabka ugu ama la wadaago ku badan goobaha video-wadaaga.
Si loogu badalo DVR in MP4 for loo maqli sahlan oo la wadaago, waxaad u baahan tahay in ay isticmaalaan awood leh oo si sahlan loo isticmaali video Converter. Wondershare Video Converter waa mid ka mid ah xaq aad rabto. Waxa keliya ma aha kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo DVR videos si aad u wax audio caadi & qaab video ay ka mid yihiin MP4, laakiin sidoo kale kaa caawinaysaa in aad si toos ah loogu badalo files DVR ku haboon qalab kala duwan ama codsiyada ugu fiican, sida iPod, iPad, iPhone iyo Apple TV iwm Waxaa intaa dheer , waxay kuu ogolaanaysaa inaad si deg deg ah loogu badalo DVR in qaabka ugu wanaagsan ee la wadaago ee YouTube iyo Facebook iwm Haddii aad u baahan tahay inaad wax ka bedel files DVR, waxaad si toos ah u samayn kartaa in this DRV weyn in Converter MP4.
Hagaha hoos ku socoto iyada oo afar tallaabo oo loogu talo galay beddelidda files DVR si aad u qaab MP4.
1 Import DVR files si DVR si Converter MP4
Si toos ah jiidi jeedi files duubo DVR deegaanka si ay DVR in ay MP4 video Converter (files, kuwaas oo la soo bandhigi doonaa sida thumbnails dhinaca bidix ee suuqa kala this). Haddii u baahan tahay, waxaad iyaga ku eegaan karo garaacida thumbnails video ah. App Tani waxay taageertaa diinta Dufcaddii, sidaas waxaad ku dari kartaa wax ka badan hal file waqti.
Fiiro gaar ah: Haddii aad u baahan tahay si ay ugu biiraan badan duubo DVR clips galay completet ka mid ah, waxaad u baahan tahay in ay sax ah "midowdo oo dhan videos galay mid ka mid file" doorasho la joogo.
2 (Ikhtiyaar) Edit files DVR aad
Riix "Edit" button in la furo daaqadaha tafatirka ay. Markaas waxaad:
Jar: saar clip video mid ka mid ah ku aadan rabin. Dalag: xadad madow ee video saar, astaysto size shaashadda (16: 9, 4: 3 iwm), iyo hagaajinta mugga. Saamaynta: Codso saamayn qabow si kor video. Watermark: . Ku dar sawir ama watermark qoraalka si aad video subtitles: Import fur-ee subtitles ama subtitles kartoo.
3 Dooro MP4 ama qaab kale oo aad rabto in aad
Riix ah "Qaabka Output" hoos-hoos liiska qaab dooro "MP4" ka "Qaabka"> "Video" sida qaab wax soo saarka. Haddii aad rabto inaad dhigay ay video codec, waxaad tidhaahdaan, H.264, waxaad u sii wadi inay riix badhanka goobta hoose in ay jiraan tweak dhimaya ah.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad ka ciyaari files DVR qalabka qaar ka mid ah sida iPhone, waxaad dooran kartaa qalabka wax soo saarka qaab ay. Oo waxaa meel default ku haboon doono qalabka ugu fiican. Haddii aad rabto inaad la wadaagto files DVR on YouTube iwm, waxaad tagi kartaa qaab> Web in ay doortaan qaab ku habboon.
4 Start DVR in ay diinta ka MP4
Riix ah "Beddelaan" button inuu ku soo bilowdo qaab beddelidda dhakhso. Inta lagu guda jiro qaab beddelidda, waxa kale oo aad ku xasil ama baabi'in kartaa beddelaad si fudud. Tani Converter Video waa mid aad u hufan, iyo bar ah habka buluug aad muujin doontaa horumarka qaab beddelidda.
Hadda, kaliya heli files wax soo saarka u isticmaalka.
Sida loo Beddelaan DVR in AVI
Sida loo Download Smosh Videos u Free
Sida loo Download Facebook Music in MP3
> Resource > Video > Sida loo Beddelaan DVR in MP4